Muse Biixi hadaannu ogeyn xantiisa halkan ha ka akhristo by Abdi Mustaf
Muse Biixi hadaannu ogeyn xantiisa halkan ha ka akhristo by Abdi Mustaf 0 July 11, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 865
Muse Biixi hadaannu ogeyn xantiisa halkan ha ka akhristo by Abdi Mustaf Musow xan taada ayaanad ogeyn ee caruurta ayaa caanaha lagu siiyaa caba caanaha hadii kale muse ayaa wadanka madaxweyne
ka noqonaya mar kaasay deg-deg u laacaan. Sidii madax-kutidii caruur nimadii la inagu bajin jiray oo kale ayaa habeen kii caruurta lagu seexiyaa yaan Muse la dooran ee caga-maydha oo seexda. Muse
Biixi reer miyi nimadu wey ku badantay oo waa ninka yidhi A/rahman Ciro
2002 ayuu Hargiesa visa yaasha ku bixin jiray. Sua'al: Musow visaha ma Somalia ayaa lagu tegi jiraymise Russia. Macquul midna maaha. Ciro Hargiesa Ruushka uumuu fadhiyin oo nin Ruusha maaha. Somalia iyo Somaliland na viso looma kala qaato siiba 2002. Bal Hadaba Muse Visa yaasha uu yidhi A/rahman Ciro ayaa Hargiesa dhexdeeda ka bixin jiray dalalka lagu geli jiray ha inoo sheego. Muse wuxuu sheegay inCiro dowladii Siyad Barre la shaqeyn jiray. Waar ninku dhoy la'aa oo Musow adigu ma mareykan baad la shaqeyn jirtay sowtaad dayuurada Bomberka ah ka ahayd Navigator. Muse siyaasada ayuu ku khafiifay ee Siyaad Barre isagaa dadka oo dalka ka shaqeeya uugu yimi markaa cid waliba wey la soo
shaqeysay. Muse galbeed iyo bari toona cod ka heli maayo. Xisbiga Kulmiye na taa wuu ogyay oo musharax kaa dhigan maayaan. Gobol walba waxaad ku tidhi oo duuban baa la hayaa oo maalinta kaambaynka la soo daynayaa. Muse siduu A/raxman Ciro isugu dhereriyaa muu horta xisbi samaysto inta uu geel nin kale leeyey la joogo. Muse sowtii cabaad kiisa
laga baxay markuu yidhi musharax baan ahay ee Silaanyo gadooday ee uu geed walba ka saaray. Muse sowkii is bahdalay mar labaad ee Silaanyo ku yidhi toobah u noqon maayo e. Isku soo xoori oo Muse Biixi waxaan leeyey
waxa la yidhi caruur-caruur aan lala ciyaarin baa jirta ee A/rahman Ciro cid uu la tartamo aduu kuugu jecelyey sabab too ah wuxuu ogyay in uu si sahlan kaaga helayo. Midina waa iga dar-daaran jooji af-xumida khalqiga oo dhan aad kaga dhex baxday haday mid qabiil tahay iyo haday mid shakhsiya tahayba. Midna ku bushaarayso, waa mustaxiil in aad Somaliland madaxweyne ka noqotaa ee waxba yaan waqti kaaga lumin sabab tuna tahay shicibku kuma ogola oo waa la is yaqaan.